बेलायती सैनिक सेवामा भर्तिभई कल्पनासम्म नगरेका स्थानहरुमा गएर वीरतापूर्वक युद्धमा लडेका गोर्खाली सैनिकहरु अनगिन्ति रुपमा हताहत भएका र सनाखत नभएका पुर्खाहरुको तथ्याङ्क तयारगर्दै साहित्य, संगीत र कलामा पुर्खाहरुलाई सजाउने प्रयास गरिन्दै छ ।
दुईसयअधिक वर्ष यताको बेलायतसंलग्न युद्धहरु सबैमा गोर्खालीहरु जोडिएका कारण बेलायती सेनामा आजसम्म कति भर्तीभए, युद्धमा कति हताहत भए, कतिले ज्यान गुमाउनु पर्याे ती सबैको तथ्याङ्कलाई खोज अनुसन्धानगर्दै प्रकाशगर्ने गोर्खालीको सन्तानभएका कारण हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । त्यस्ता प्रकाशनले कटु यथार्थहरु समाजमा झल्काउने मात्र होइन, नेपाली, विशेष राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरको ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जस्ता थुप्रै पक्षहरुको परिअध्ययन प्रकृयालाई बढावा दिनेमा सहयोग पुग्ने छ ।
वीरतापूर्वक युद्धमा लडेका गोर्खाली सैनिकहरु के कतिले वीरगति पाए ? विश्वका धेरै देशहरु जहाँ गोर्खाली पुर्खाहरु हताहत भए, ती केकालागि भए ? लगायतका सम्हाल्नै नसक्ने प्रश्न रहेको अवस्थामा विश्वभरका युद्ध समाधि स्थलहरुमा रहेका गोर्खालीहरुका समाधिप्रति हङकङमा रहेको गोर्खा सिमेट्री ट्रष्ट हङकङ र हङकङका सचेत गोर्खाका सन्तानहरुले विशेष चासो देखाएका छन् ।
विश्वका प्रख्यात शब्दकोश र इन्साइक्लोपेडियाहरुले गोर्खालीको परिभाषा भाडाको सिँपाही –(मर्सीनरी) लगाएका छन र यस्तै रुपमा बुझिराखेका छन् संसारले गोर्खालीहरुलाई । तीनै शब्दकोश र इन्साइक्लोपेडियाबाट यस्ता तुच्छ परिभाषाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रकाशकहरुसंग तथ्य र अर्थपूर्ण परिभाषासहितको प्रकाशनको मांगगर्दै विगत ६ वर्षको अवधिमा गोर्खालीहरुको वीरता र वलिदानका कार्यहरुको खोजी कार्यमा हामी संलग्न भएका छौं ।
नेपाली इतिहासमा २ सय अधिकवर्षदेखि गोर्खालीहरुले बेलायतलाई र सन् १९४७ देखि भारतलाई दिँदै आएको सैनिक सहयोगजस्तो यर्थाथलाई विश्लेषणगर्दै आम विद्यार्थीहरुलाई गोर्खाली इतिहास र जनजीवनको जानकारी दिनुकासाथै बृहत खोज र अनुसन्धानप्रति प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुष गरेका कारण हङकङका नेपालीहरु यसबारेमा अनवरत रुपमा लागि परेकाछन् ।
हङकङ लगायत विश्वका विभिन्न ठाउँहरुमा प्रथम तथा दोश्रो विश्वयुद्धमा मारिएका गोर्खालीहरुको समाधिको मर्यादित ढंगले संरक्षण–संवद्र्धनगर्दै नेपाली ऐक्य श्रीबृद्धिको एउटा दरिलो इन्स्टिच्यूसन बन्नसकोस् भन्ने हेतुले विशेषगरी गोर्खा सिमेट्री ट्रष्ट हङकङ कार्यरत रहेको छ । यसबारेमा विभिन्न देशहरुमा छरिएर बसेका नेपालीहरुलाई पनि पुर्खाको यस मुद्धामा लाग्न अभिप्रेरित गरिरेको छ ।
हाम्रो मूल देश नेपालमा जनजातिहरुको आन्दोलनले चरमरुप लिइरहको बेला नेपालीजाति सम्बन्धि यति दर्दनाक इतिहास हाम्रोसामु भएको बेला हामीले चासो दिएर आवश्यक कदमहरु अधि बढाउने बेला आएको छ । के हामीले यस बारेमा कुनै पहल गरिरहेका छौ त ? आफूलाई सोध्ने बेला भएको छ । किन आदिवासी जनजाति मात्रै लाहुरे भए ? नेपालको इतिहासमा उल्लेख भएको एक सानो अंशलाई लिने हो भने पनि प्रथम विश्वयुद्धमा त्यस बेलाको नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशत नेपाली युवाहरु प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी थिए भन्ने उल्लेख छ । यो २० प्रतिशत नेपालीहरुमा कोको संलग्न थिए ? के हामीले सोध्यौं, किन र केकालागि आत्मावलिदानी थियो भनेर ? यो त्याग, वलिदानी नेपालकालागि थियो । रगत हाम्रैलागि बगेको थियो । विश्वकै सोझा, इमान्दार हाम्रा पुर्वजहरुले नेपालकालागि रगत बगाए । हामी जहाँ जुन अवस्थामा लडे पनि त्यो नेपालकालागि थियो । वीर समशेर, चन्द्रसमशेरहरु पनि नेपालकै थिए । यीनीहरुकै स्वार्थका कारण महासमरमा सबैभन्दा सानो उमेरका सेना भएर हाम्रा गोर्खाली सेनाहरुले ज्यान गुमाए । त्यसबेला सिंगो नेपाली गाउँघरहरु शमसानघाट बनाए । आज नेपाल राष्ट्रले उनीहरुको वलिदानलाई के कति सम्मान गर्यो । नालापानी काँगढामा भएका युद्धभन्दा भन्दा कैंयन गुणा ठूलो त्याग भएको गोर्खाली इतिहासलाई हामीले के कति सम्मान गर्न सक्यौं ?
नेपाल सरकार हिसाब देखाऊ
गत २ सय वर्षदेखि नेपालले गोर्खाको नामको पैसा चलाइ राखेको छ । पैसाको कुनै हिसाब छैन हामीलाई यसमा धोका भएको छ । २०० वर्ष सानो अवधि पनि होइन । प्रथम विश्वयुद्धउसो नेपालले हिसाब गरेरै वर्षेनी १० लाख नेपाली रुपिया लिइराखेको थियो । सन् १९२३ देखि दोब्रिएको छ । दोश्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९ देखि सन् १९४५) देखि अझ बढेको छ । यसको हिसाबकिताब नदेखाऊदा गोर्खालीहरुको अनादार भएको छ । हरेक गोर्खाले यसको हिसाब पाउनु पर्छ । यसकालागि विशेष समिति निर्माण गरेर नेपाल सरकार हिसाब देखाऊ ।
युद्धमैदानमा हताहत गोर्खाको तथ्यांक, नियम र नैतिकता दुबैले जारी गर्नुपर्ने काम राज्यको हो तर आज पर्यान्त नेपाल सरकारले गरेको छैन । यो सरासर गोर्खा प्रति बेइमान हो । नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय संग्राहलयमा समेत गोर्खा योगदानको नामनिशाना राखेको छैन । नेपाली स्वार्थकालागि हाम्रा पुर्खाहरु हताहत भएका हुन् र यो विश्वभरका नेपालीको चासोको विषय हो । सबै नेपालीले बुझ्न पाउनुपर्छ कि गोर्खाभर्ती केकोलागि थियो र यससँग जोडिएका मृत्युसंख्या, यसले ल्याएको सामाजिक, पारिवारिक, भौतिक र मानसिक विचलनले गर्दा आज गोर्खा सम्बन्ध जाति समुदायलाई ठूलो असर परेको छ । यसकालागि समाजशास्त्रीय अध्ययन गरिनु पर्छ । नेपाल सरकार यसको पनि हिसाबकिताब देखाऊ र गोर्खाभर्ती आबद्ध समाजलाई न्याय गर ।
संसारका विभिन्न देशहरुमा समाधिहरु छन् त्यहाँ गोर्खालीहरुको पनि समाधि कुनै न कुनै तवरले रहेको छ । बृटिश संलग्न युद्धमा गोर्खालीहरु पनि संलग्न थिए यसर्थ आजको यस लेखमा विश्वभरका युद्ध समाधिस्थलहरुको बारेमा यस लेखमा छोटकरीमा जानकारी गराइएको छ ।
१. विश्वका समाधिहरुको संरक्षण कसले गर्छ ?
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य प्रान्तीय युद्धहरुमा हताहत हुनेहरुको समाधिको संरक्षण सन् १९१७ मा स्थापित कमनवेल्थ वार ग्रभ्स् कमिशनले गर्दै आएको छ । बेलायत, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रलिया, भारत र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको कमिशनमा खर्चको भार उनीहरुले नै मिलेर गरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा बेलायतले ७.४३, अष्ट्रेलिया १.०५, क्यानाडा १०.७, न्यूजिल्याण्ड २.१४, भारत १.२ र साउथ अफ्रिका २.११ प्रतिशतले खर्चको मात्रा बाडफाडगरी समाधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउँने काम भइरहेको छ ।
मृतकको (शहिदको) जसरी पनि समाधि उठाइनुपर्छ, स्थायी, एकैखाले एवं समाधिमा रंगभेद हुनुहुँदैन भन्ने कमिशनको नीति अनुरुप हाल विश्वका विभिन्न देशहरुमा वार ग्रेभ्स कमिशन कार्यरत रहेको छ । आज त्यस्ता देशहरु १४९ छन् र यी देशहरुमा जम्मा २३,२६४ समाधिस्थलहरु १,६९५,१७४ समाधिहरु रहेका छन् । सनाखत हुन नसकेकाहरु मात्रै २११,९२९ छन् । ती प्राय अधिकांश समाधिस्थलहरुमा गोर्खालीहरुका समाधि समेत रहेका छन् । हताहत र सनाखत हुन नसकेका संख्याभित्र कति गोर्खाहरु छन् यसबारेमा यथेष्ट जानकारी प्रर्याप्त मात्रामा छैन् यसर्थ खोजी गर्नु हाम्रो पुर्खाधर्म हो ।
२. विश्वमा रहेका समाधिहरुको स्थिति र अवस्था कस्तो छ ?
पूर्वी जर्मनीको जरेनड्रोफमा सन् १९८९ पछि (पर्खाल ढलेपछि) खोजतलास हुँदा भारतेली मूलका समाधिहरुमा गोर्खालीहरु पनि फेलापरेका छन् । धेरै ठाउँका समाधिस्थलहरु, जस्तै भारतको राजधानी दिल्लीको संसदभवनकै छेउमा स्थापित समाधिस्थलहरु, ग्यालिपोली (टर्की) को समाधिलाई स्थानीय रुग्न मौसमले असर पारिराखेको छ भने फ्रान्स र वेल्जियममा वर्षेबाडीबाट त्यहाँका समाधिहरुलाई जोगाउन गाह्रो परिरहेको छ । इजिप्टमा पानीको अभावले समाधिउद्यानहरु सुक्ने स्थितिमा छन भने बेलायतमै धेरै समाधिस्थलहरु नीजि जग्गामा परेकाले संरक्षण–संवर्धन कार्यमा गाह्रो भइरहेको छ ।
३. हङकङका समाधिस्थलहरुमा गोर्खाली
सिंगापूर, इटली जस्तै हङकङ गोर्खालीहरुकालागी भनी समाधिहरु गोर्खा सिमेट्रीका नाममा संरक्षणमा रहेका छन् । हङकङको क्यासिनो लाइनमा अवस्थित ताम्मी क्याम्पमा एक ठूलो क्षेत्रफल भित्र बेलायती सैनिक सेवा कालमा मृत्यूवरण गरेका गोर्खालीहरुका ५ सय ८० भन्दा बढी समाधिहरु संरक्षणमा रहेका छन् । यसकोपनि वार ग्रेभ्स कमिशनले सुरक्षा सम्वद्र्धनकालागि जिम्मेवारी लिएको छ ।
हङकङजस्तो साँघुरो ठाउँमा ११ समाधिस्थलहरु दर्ता भएकाछन् तर कतिको नामोनिशान छैन, जस्तो नर्वेजियन फार्म सिमेट्रीको नाम छ, तर सिमेट्री छैन । यो सिमेट्रीमा एकजना राइफलम्यान लिम्बू सर्भिस नम्बर २११४५३६० परेको छ । अहिले खोज गरिन्दैछ ।
समाधि संख्या ६४०३ छ तर ठाउँमा ती सब छैनन् । सनाखत हुन नसकेको संख्या ६२१ छ, यसमा गोर्खाहरु पनि छन्, नामहरु एमओडीसित छ । हङकङमा हताहत भएको संख्या १८२५ भएपनि बाहिरबाट अरु ल्याइएको छ । समाधिहरु जग्गा अभावको कारणले जथाभावी पनि राखिएको छ, जस्तै, कृष्णबहादुर थापा, खडगसिंह गुरुङ र पूर्णवीर राई हिन्दू मन्दिर समाधिस्थल, ह्याप्पीभ्यालीमा राखिएका छन् ।
४. विश्वका केही समाधिस्थलहरु र समाधिहरु
अल्जेरियामा २,१६५ हताहत भएकोमा १२२ को सनाखत हुन सकेन । १३ समाधिस्थलमा २,०४३ समाधिहरु उठाइएका छन् । अष्ट्रेलियाको ८७४ समाधिस्थलमा १४,४६८ समाधिहरु राखिएका छन् ।
वेल्जियममा २,५३,३८८ हताहत भएकोमा ४८,५५५ को सनाखत हुन सकेन । यहाँ ६१३ समाधिस्थलमा २,०४,८३३ समाधिहरु उठाइएका छन् । यसको अर्थ बमबारुदले अंगभंग भई चिन्न नसकिने अवस्थामा धेरै थिए । यहाँ गोर्खाहरुको संख्या ठूलो छ भनिन्छ ।
क्यानाडामा ठूलो संख्यामा समाधिस्थलहरु छन्, २,८११ समाधिस्थलहरु जहाँ १८,४२२ समाधिहरु राखिएका छन् । साइप्रसमा ९ समाधिस्थलमा ३६९ समाधिहरु छन् । डेनमार्कमा १३० समाधिस्थलहरु जसमा १००० समाधिहरु छन्, सनाखत नभएको ११६ जना । इजिप्टमा २४ समाधिस्थलहरुमा ५२, ४५९ समाधिहरु छन्, सनाखत नभएको १,३३५ छन् भने सिरियामा २ समाधिस्थलमा १,२८४ समाधिहरु राखिएका छन् । त्यसरी नै टान्जानियामा खालि २ समाधिस्थल छन् जहाँ ५४,९२३ समाधिहरु अटाइएका छन् । फ्रान्समा जम्मा हताहत भएको संख्या ४,७३,३९२ छ जसमा १,१६,४४० को सनाखत हुन सकेन ।
यत्रो ठूलो संख्यामा गोर्खाहरु कति होलान्, खोजको विषय छ । फिजीमा ७८ मात्र हताहत भए जसमा ३ को सनाखत हुन सकेन । यहाँ समाधिस्थल २ र समाधि १०९ छन् । यहाँ गोर्खाको समाधि छ भन्ने बताइएको छ । जर्मनीमा ४६ मात्रै समाधिस्थल जसमा ३१,५६२ समाधिहरु राखिएका छन् ।
सनाखत नभएको संख्या २,३६२ छ । भारतमा हताहत भएको संख्या १०,९९६ भएपनि अरु नै जगा हताहत भएकाहरुको पनि समाधिहरु उठाइएकोले यहाँ समाधिसंख्या ६२,१४५ हुन पुगेको छ र यी संख्यालाई २३ समाधिस्थलहरुमा राखिएका छन् । इन्डोनेशियामा समाधिस्थल ६ र जम्मा समाधि ३०४९ रहेको छ । इरानमा एउटै मात्र समाधिस्थल जसमा ४१३९ समाधिहरु राखिएका छन् भने इराकमा १५ समाधिस्थलमा ५४,१३७ समाधिहरु छन् । त्यहाँ राजनैतिक उथुलपुथुलले अहिले समाधिको संभरणमा कठिनाइहरु आएको छ । आयरल्याण्डमा ६५७ समाधिस्थल जसमा ३,०९० मात्र समाधिहरु राखिएका छन् । इजरायलमा २८ समाधिस्थल र समाधिहरु १५,३८८ छन् । सनाखत हुन नसकेको संख्या नै २,५८१ छ । इटालीमा ४६,६९६ हताहत भए जसमा १,९१० को सनाखत हुन सकेन । समाधिस्थल संख्या १२३ र समाधिसंख्या ४९,२५९ छ । जापानमा २८ समाधिस्थलमा जम्मा १७३८ समाधि छन् । केन्यामा समाधिस्थल ३२ र समाधिहरु २०९ छन् भने नाइजेरियामा समाधिस्थल ३२ र समाधिहरु ४,६५२ छन् । सेरिअलोनमा ४ समाधिस्थल जसमा १३५ समाधिहरु उठाइएका छन् । त्यसरी नै दक्षिण अफ्रिकामा ८,४३७ समाधिहरु ५९८ समाधिस्थलहरुमा राखिएका छन् ।
५. समाधिको देश बेलायत
दुुुुई महासमरको मूल जड बेलायत रहेकोले सबैभन्दा बढी युद्धको भार पनि बेलायतलाई परेको थियो । यहाँ हताहत हुनेको संख्या १,७२,१४९ छ जहाँ सनाखत हुन नसकेको संख्या १,३९१ छ । समाधिस्थलको संख्या नैै १२,३५४ छ र यी समाधिस्थलहरुमा ३,०४,७७१ व्यक्तिहरु राखिएका छन् । कूल क्षेत्रफल २,२८,३५६ वर्ग किमी भएको बेलायतलाई क्षेत्रफलको आधारमा हेर्ने हो भने यसलार्ई समाधिको देशभन्दा हुन्छ । यसबाट जसकसैले पनि हिसाब लगाउन सक्छ गोर्खाहरुले कुन स्तरको युद्ध कति लामो लडेका थिए भनेर । अनुपातमा अमेरिकामा ९८७ मात्र हताहत भए । ३ को सनाखत हुन सकेन । ९८३ व्यक्तिहरुलाई ४६६ समाधिहरुमा राखिएका छन् । नेपालमा १ व्यक्ति हताहत भएको वार ग्रेभ्स् कमिशनले हिसाब राखेको छ, सो व्यक्ति को र कहाँ होला ? धरान र पोखरातिर राखिएका समाधिहरुको संरक्षण–संवर्धनको अवस्था कस्तो होला ?
६ं अन्य देशहरुमा समाधि
यी माथि उल्लेखित देशहरु बाहेक यी देशहरुमा पनि गोर्खा समाधिहरु छन् ः अल्बानिया, एन्टिगुआ, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, अजरबैजान, अजोर, बहामा, बंगलादेश, बारबाडोस, बेलिज, बर्मुदा, बेट्सवाना, डिगोगार्सिया, ब्राजिल, बुलगेरिया, ब्यामेरुन, क्यानारी टापू, केप भर्द, चाद, चीली, कंगो, कोष्टारिका, क्रोएशिया, क्युबा, गणतन्त्र चेक्स, दिबौती, डोमेनिका, गिनीया, इरिट्रीया, इस्टोनिया, इथियोपिया, फोकल्याण्ड, फिजी, गाम्बिया, घाना, गिब्राल्टार, ग्रीस, ग्रेनेडा, गुआटिमाला, गिनिया, गुयाना, होन्डुरस, हंगेरी, आइसल्याण्ड, जमाइका, लाटभिया, लेसेथो, लाइबेरिया, लिथुनिया, लक्जिमवर्ग, मेसोडोनिया, मादागास्कर, मदइरा, मालावी, माल्दिभ्स, माली, मार्टिनिक, माउरिसस, मोनाको, मोरोक्को, नामिबिया, नर्वे, ओमन, पानामा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड,पोर्तुगल,
पोर्टोरिको, रोमानिया, रस्सिया, सामोआ, साउदी अरयिबा, सेनेगल, सर्बिया, सामालिया, स्पेन, सुडान, स्वाजिल्याण्ड, स्वेडन, स्विजरल्याण्ड, टोगो, ट्रिनिदाद, टोंगा, उगाण्डा, उक्रेन, उरुगुए, भेनेजुएला, येमेन, जाम्बिया र जिम्बाबे ।
पुर्खाहरुको सम्झनामा पुर्खा दिवस
गोर्खा सिमेट्री ट्रष्टको विशेष पहलमा हङकङमा रहेका नेपालीहरुले हरेक ५ अप्रिललाई पुर्खा दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यहाँ भएका नेपालीहरुले समाधिस्थल गइ पूजाआजा गर्दै पुर्खाहरुको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी हङकङमा अध्ययनरत नेपाली नानीहरुको सक्रियतामा अप्रिलमा पुर्खा दिवस सम्पन्न गरेको थियो यो क्रम २००५ सालदेखि निरन्तर भइआएको छ । आगामी वर्षहरुमा यसलाई हङकङको नेपाली भाषाको पठन पाठनमा समेट्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने ट्रष्टले जनाएको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुमा भावनात्मक संबन्ध विस्तार गर्न सो दिनलाई पुर्खा दिवस मनाउन आग्रहगर्दै व्यापकता दिनु हाम्रो पुर्खाधर्म हो ।
इतिहासको पुनर्लेखन गरौं
गणतन्त्रको स्थापनाले नयाँ मूल्य मान्यताहरु स्थापित गरेको छ । व्यवस्थाको मारमा थिचेको हिजोको अथ्र्याइ र मूल्यमान्यताहरु उत्तरगणतन्त्र युगमा काम नलाग्ने खालका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली इतिहासको पुनर्लेखन अहिलेको घडीको माग हो ।
नेपाली मानदण्डको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको तीतो यथार्थ नेपालमा वीरविरंगनाको गाथा नेपालको सानो�